လျှောက်ပတ်ကြည့်ရင်းတွေ့တဲ့ ဟာသတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » လျှောက်ပတ်ကြည့်ရင်းတွေ့တဲ့ ဟာသတွေ
Posted by Yin Nyine Nway on Jul 16, 2010 in News |3comments
အမေရိကန်သမ္မတ ကလင်တန်လက်ထက်ကဖြစ်သည်။ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မိုရီ သည် အမေရိကန်သို့ ချစ်ကြည် ရေး ခရီးထွက် မည် ဖြစ်သည်။ ခရီးမထွက် ခင် တွင် အဂ်လိပ်စကားပြောအနည်းငယ်သင်ကြား နေသည်။ အတူ လိုက် ပါမည့် ဘာသာပြန် သူမှ “ဝန်ကြီးချုပ်ခင် ဗျား သမ္မတ နဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ မှာ လက်ဆွဲ နှတ်ဆက်ပြီး ၊ How are you? လို့ နှတ်ဆက်ပါ၊ အဲဒီ့ အခါမှာ သမ္မ တ က I am fine, and you. လို့ ပြန်မေးပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒါပြီးရင် ဝန်ကြီးချုပ် က mee too လို့ ပြန်ပြောရုံပါ။ ကျန်တာတွေကို တော့ ကျွန် တော် ဘာသာပြန်ပေးပါ့မယ်။
ကလင်တန်။ ။ (ရုတ်တရတ် ကြောင်သွားသော်လည်း ဟာသပြောသည်မှတ်၍ ပြန်လည် ဟာသနှောလိုက်သည်) Well, I am Hilary’ husband, and you?har har.
မနီ အိပ်အိုက်နေသဖြင့် မကြားသော်ကြောင့် သူမ နောက် တွင် ထိုင်နေ သော ကို ဖြိုးမှ ဘော့ပင်နှင့် ထိုး၍ သ တိ ပေးလိုက် သည်။ ထိုအခါ
မနီ။ ။” ဘုရားသခင်” ( လန့်သွား သဖြင့် ရောင်၍ အော်လိုက်သည၊် ထို့နောက် သူမ ပြန်လည် အိပ် ပျော်သွား ပြန်သည်)။
မနီ။ ။ (လန့်သွားပြန် သဖြင့် ရောင်၍ ထအော်ပြန်သည်၊ ထို့နောက် တဖန်အိပ်ပျော်ပြန်လေသည် ) ” ဂျီးဆပ် ခရစ်”
မိမိထက် များစွာ ငယ်ရွယ်သော မိန်းမတယောက်ကို လက်ထပ်ယူထားသည့် အသက် ၉၃
နှစ်အရွယ်ရှိ အဘိုးအိုတယောက်သည် သူ၏ ဆရာဝန်ထံ ရောက်လာပြီး
သူတို့ကလေးရတော့မည့်အကြာာင်း ပြောပြလေသည်။
‘ကျွန်တော် ပုံပြင်ကလေးတပုဒ် ပြောပါရစေ၊ တခါတုန်းက အလွန်သတိမေ့တတ်တဲ့
လူတယောက်ဟာ အမဲလိုက်ထွက်ပါတယ်၊ သေနတ်ကို ယူရမယ့်အစား ထီးတလက်ပဲ
ယူသွားပါတယ်၊ တောထဲမှာ ဗြုန်းခနဲ ခြင်္သေ့တကောင်နဲ့ ပက်ပင်းတိုးမိတော့ သူက
လက်ထဲမှာပါတဲ့ ထီးနဲ့ ထိုးချိန်လိုက်ပြီး ပစ်ချလိုက်တယ်တဲ့၊ အဲဒီမှာ
ခြင်္သေ့ကြီးလည်း တုန်းခနဲ လဲကျသေဆုံးသွားပါရော’
‘ဟာ မဟုတ်တာကွ၊ လုံးဝကို မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ တယောက်ယောက်က ဝင်ပြီး
တရုတ်ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပါ။သူငယ် ချင်းတို့ကြားဖူးပြီးသားလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။
တခါက လူနှစ်ယောက်ဟာတောထဲမှာမျက်စိလည် လမ်းမှားပြီးလမ်းပျောက်နေပါတယ်။ ဒါကို သစ်ခုတ်သမားတစ်ယောက်ကကယ်ပြီး အိမ်ကိုခေါ်လာတယ်။ညရောက်တော့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက် က သစ်ခုတ်သမားရဲ့သမီးကို——-တယ်။ဒါနဲ့ သစ်ခုတ်သမားလည်းအလွန်စိတ်ဆိုးပြီးသတ်မယ်လုပ်ပါရော။အဲ့ဒီလူနှစ်ေ ယာက်လည်း သစ်ခုတ်သမားကိုမသတ်ဖို့ဒူးထောက် တောင်းပန်တာပေါ့။ဒါနဲ့ သစ်ခုတ်သမားလည်းအခွင့်အရေးပေးတဲ့ အနေနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ခြံထဲမှာရှိတဲ့ သစ်သီး၁၀လုံးစီ ခူးခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။မကြာခ င်မှာ ပထမလူက မက်မန်းသီး၁၀လုံးကိုယူပြီးပြန်လာပါတယ်၊သစ်ခုတ်သမားက အဲ့ဒီမက်မန်းသီးကို မင်းရဲ့ဖင်ပေါက်ထဲကိုထည့်ရမယ်၊တ ကယ်လို့ ၁၀လုံးလုံးထဲ့ပြီးတာတောင်တစ်ချက် မျှမရယ်ရင် အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်တဲ့၊ဒါနဲ့  ပထမလူလည်းထဲ့နေတာ ၉လုံးမြောက်လည်းရောက်ရော အားပါးတရရယ်လိုက်လို့ သတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ယမမင်းဆီကိုရောက်တော့ ယမမင်းက “မင်းကွာ ၊နောက်နှစ်လုံးသည်းခံလိုက် ရင် မင်းသေစရာမလိုတော့ဘူး၊ဘာကြောင့် ရယ်ရတာလဲ”လို့မေးတော့ ပထမလူက အရယ်ကိုမရပ်နိုင်သေးဘဲ “ယမမင်းကြီး ၊ကျတော်မျိုး မရယ်ဘဲနဲ့၁၀လုံးလုံးထဲ့နိုင်ပါတ ယ်၊ဒါပေမယ့် ၉လုံးမြောက်မှာ ကျနော့သူငယ်ချင်းက ဒူးရင်းသီး၁၀လုံးကို သယ်လာတာတွေ့လိုက်ရလို့ ပါ။”တဲ့
ခရီးသည်တင် လေယာဉ်ကြီးတစ်စီးပေါ်တွင် လေယာဉ်မယ်က ခရီးသည်များအား အသိပေးစကားပြောလေသည်။
လေယာဉ်မယ်… ကျေးဇူးပြုပြီး နားဆင်ကြပါရှင်။
ခရီးသည်များ….အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပြီး လေယာဉ်မယ်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။
လေယာဉ်မယ်…၀မ်းသာစရာ သတင်းနှစ်ခု နဲ့ ၀မ်းနည်းစရာ စကားလေး တစ်ခွန်းလောက်ပြောကြားခွင့်ပြုပါ။
လေယာဉ်မယ်… ၀မ်းသာစရာ စကားကတော့ ပထမ အချက် အနေနဲ့ အခုခရီးစဉ် လေယာဉ်ခများကို အခမဲ့စီးနင်းခွင့်ပြုမှာမို့ ငွေများပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့ ပါပဲ။
ခရီးသည်များ…. ဟေး… ဟုအော်ကာ ၀မ်းသာသွားကြသည်။
လေယာဉ်မယ်…နောက်ထပ် ၀မ်းသာစရာ တချက်ကတော့ ခရီးသည်တစ်ဦးကို ဒေါ်လာငွေ ၅၀၀၀စီ အပိုထပ်ဆောင်း ပေးအပ်သွားမယ်ဆိုတာပါပဲ။
ခရီးသည်များ…. ဟေး… ဟုအော်လိုက်ကြပြန်သည်။
လေယာဉ်မယ်… ၀မ်းနည်းစရာတစ်ခုကတော့ ကျွန်မတို့ လေယာဉ် စက်ချွတ်ယွင်းပြီး မြေပြင်ကို ထိုးကျနေပြီဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။
စိတ္တဇ ဆေးရုံ တစ်ခုမှာ ဆရာဝန်တွေဟာ ပြန်ကောင်းလာတဲ့ လူနာတွေကို ပြန်လွတ်ပေးဖို့စဉ်းစာကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့ဟာစမ်း သပ်မှုတစ်ခု လုပ်ကြပါတယ်။ Video ပြစက်ရှေ့မှာ ရှိတဲ့ ထိုင်ခုံတွေကိုဆေးသုတ် ပြီးတော့သူတိုကို Video ပြပါတယ်။ ဘယ်သူကများ ဆေးသုတ်တာကို သိမလဲ လို စမ်းသပ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ကတော့ ထိုင်ခုံတွေကို သေသေချာချာ ကြည့်
ပါတယ်။ ပြီးတော့ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ထိုင်ခုံမှာဖြန့် ခင်း ပြီးမှထိုင်တယ်။ ဆရာဝန်တွေက ဒီလူတော့ရောဂါပျောက်သွား ပြီဆိုပြီး အိမ်ကို ပြန်
လွတ်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ သူမိန်းမ ကမေးတယ်။
“ရှင် ထိုင်ခုံတွေမှာ ဆေးသုတ်ထားတယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့ဟုတ်လား , ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ”
“ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ…ငါကအရ ပ်ပုလို့ထိုင်ခုံမှာသတင်းစာခုပြီးထိုင်တာဟ…”
စိတ္တဇ ဆေးရုံတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။ လူနာတစ်ယောက်သည် သစ်ပင် ပေါ်တွင်ရောက်နေသည်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကအောက်မှနေ ပြီး ဆင်းလာဖို့ ပြောနေသည်။
“ဟေ့ကောင်…….မင်းဆင်းမှာလား..မဆင်းဘူးလား..ငါ ပစ်လိုက်မှာနော်..”
“မင်းတကယ်မဆင်းဘူးလား…. ငါ ပစ်လိုက်မှာနော်..”
ဆရာဝန်လဲ ကြံရာမရ ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီ အချိန်မှာ နောက်လူနာတစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။ ဆရာဝန်က
အဲဒီလူနာဆီ ကနေအကူအညီတောင်းပါတယ်။လူနာ ကသေနတ်ကိုယူလိုက်ပြီး
“ဟေ့ကောင်…. မင်းဆင်းလာခဲ့စမ်း..ငါ ပစ်လိုက်မှာနော်..”
“ဟုတ်…ဟုတ်..ဆင်းလာပါပြီ. ..မပစ်ပါနဲ့ …ဆင်းပါပြီ..”
“မင်းက ငါပြောတုံးကတော့ မဆင်းဘူး…ဘာလိုသူပြောမှဆ င်းတာလဲ..”
“ဟာ..ဆရာကလူကောင်းဆရာရဲ့ ..တကယ်မပစ်ဘူးဆိုတာကျွှန်ေ တ်ာသိတယ်..အဲကောင်ကရုးနေတာ..တကယ်ပစ်မှာ..”
ရွာတစ်ရွာမှာ ဦးသာဒွန်းနဲ့ ဒေါ်ပုဆိုတဲ့ သူဌေးလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတ ယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေအားလုံးက သူဌေးကြီး ဦးသာဒွန်းလို့ မခေါ်ကြပဲ သူဌေးမကြီး ဒေါ်ပုရဲ့ ယောကျာင်္းဆိုပြီး ခေါ်ကြတယ်။ ဒီအခါမှာ ဦးသာဒွန်းက စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်ပါဘူး။ စီးပွားရေးတွေကျတော့ နှစ်ယောက်အတူတူကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့ရပြီးမှ နာမည်ကြီးတော့ မိန်းမဖြစ်သူက သူဌေးမကြီးဒေါ်ပု ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတယ်။ ရွာမှာရှိတဲ့ အလှူပွဲ မင်္ဂလာပွဲတွေက ဖိတ်စာပို့ရင်လဲ သူဌေးမကြီး ဒေါ်ပုနှင့် ခင်ပွန်း ဆိုပြီးဖိတ်တော့ ဦးသာဒွန်းရဲ့နာမည်က တစ်ခါမှကို မပါပါဘူး။ ဦးသာဒွန်းရဲ့ အတွေးထဲမှာ သူဟာမိန်းမရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်မှာ မိနေတော့ သူ့နာမည်ထွက်ဖို့ လုပ်ရမယ်ဆိုပြီး တွေးမိပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ အလှူတစ်ခု သွားဖို့ကြုံလာတဲ့အခါ သူနာမည်ကြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအတိုင်း အလွန်ကိုလှပတဲ့ မြင်းဖြူကြီးကို စီးပြီးအိမ်ကထွက်လာပါတယ်။ မြင်းစီးပြီးထွက်လာတဲ့အချိ န်မှာ ဦးသာဒွန်းစိတ်ထဲမှာ တွေးနေတာက သူ့ကိုဒီပုံအတိုင်းသာ လူတွေမြင်ရင် သူဌေးကြီးဦးသာဒွန်း မြင်ဖြူကြီးစီးပြီးလာတယ်လို့ လူတွေက ပြောမှာပဲဆိုပြီး တွေးလာပါတယ်။ တကယ်တမ်း အလှူကိုလဲရောက်ရော သူဌေးမကြီး ဒေါ်ပုယောကျာင်္း မြင်းဖြူကြီးစီးလာတယ်လို့ပဲပြောကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ ဦးသာဒွန်းတစ်ယောက် စိတ်ညစ်သွားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်မလျှော့ပဲ နောက်တစ်ခါ ကြိုးစားပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ရွာထိပ်မှာ ဇရပ်အကြီးကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်ပြီး သူဌးကြီး ဦးသာဒွန်းဆိုတဲ့နာမည်ကို အကြီးကြီးရေးပြီး ဒေါ်ပုဆိုတဲ့နာမည်ကို သေးသေးလေးပဲ ရေးထားပါတယ်။ ဒီဇရပ်ကိုတော့ သူဌေးကြီးဦးသာဒွန်းရဲ့ဇရပ်လို့ ခေါ်မှာပဲဆိုပြီးတွေးနေပြန် တယ်။ ဒါနဲ့ ဘယ်လိုိခေါ်မလဲဆိုတာ သိချင်တော့ ခရီးသွားတစ်ဦးပုံ အယောင်ဆောင်ပြီး ခရီးသွားအဖွဲနဲ့ ရောလိုက်လာပါတယ်။ ညနေစောင်းလာတော့ ခရီးသွားဖော်တွေကို မေးပါတယ်။ ညကျရင် ဘယ်နေရာမှာများ တည်းခိုလို့ရနိုင်မလဲမေးတော့ ခရီးသွားတစ်ဦးက ခင်ဗျားတော်တော်ညံ့တာပဲ ရှေ့နားမှာ သူဌေးမကြီးဒေါ်ပုလှူထားတဲ့ ဇရပ်ရှိတယ်လေလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလဲ ဦးသာဒွန်းတစ်ယောက် ဒီမိန်းမရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်က မလွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ မထူးပါဘူးဆိုပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ပါတယ်။ ဦးဇင်းဦးသာဒွန်း ရွာထဲကို ဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါကျတော့လဲ လူတွေက သူဌေးမကြီးဒေါ်ပုရဲ့ ဦးဇင်းကြွလာပြီဆိုပြီးပြောကြပြ န်တယ်။ အော် ဘုန်းကြီးဝတ်တာတောင် ဒေါ်ပုနာမည်အောက်ကမလွတ်ဘူးဆိုပြီးဘုန်းကြီးကနေထွက်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဦးသာဒွန်းလဲ မထူးပါဘူးဆိုပြီး ဘိန်းစားမယ်ဆိုပြီး ဘိန်းစားပါတော့တယ်။ အဲ ဒီတစ်ခါတော့ ဦးသာဒွန်းနာမည်ကြီးပါပြီ။ ဘယ်လိုနာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ လူတွေခေါ်ကြတာက ဘိန်းစားသာဒွန်း ပါတဲ့။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အပျိုကြီတစ်ဦး ညည်းညည်းညူညူ ပြောကြားသည်ကား……….. .
“ငါ့ကို ယူမယ့်သူကျတော့ တစ်ယောက်မှ မရှိလို့”
နိုင်ငံခြားက ဟာသတွေဖတ်ရတာ ရိုးနေပါပြီ။
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ နောက်လည်း ဟာသတွေထပ်တင်ပေးပါ။